Warbaahinta Bulshada iyo Maareynta Diidmada | Martech Zone
Subaxaan waxaan aqrinayay warqad cad oo weyn oo laga helay barta Aprimo, is dhexgalka warbaahinta bulshada.
Suuqyadu uma baahna inay ka soo bilaabaan xoq si ay u dhisaan awoodaha ciyaarta-beddelka ee warbaahinta bulshada ee isku-darka isgaarsiinta jirta Iyagoo ula dhaqmaya warbaahinta bulshada sidii kordhinta warbaahinta cusub iyo Web 1.0, suuqleyda ayaa ka faa'iideysanaya awooddeeda cusub ee ku dhex jirta bandwidth-ka iyo ilaha ay heli karaan.
Warqada cad ayaa la hadlaysa doorarka iibka iyo suuq geyn xoogaa la rogay. Suuqleyda - oo sida caadiga ah aan waligood xiriir la yeelan dadweynaha - ayaa hadda looga baahan yahay inay la xiriiraan oo ay u maareeyaan sumadda si guud. Waa inay ku dhammaystiraan tan iyada oo aan wax tababar ah haba yaraatee maaraynta diidmada. Waxaan sidoo kale ka wada hadlay tan soo bandhigida Webtrends Engage.
Isla mar ahaantaana, our dadka wax iibiya waxaa laga filayaa inay xilal qabtaan Warbaahinta Bulshada, hirgelinta hal-ku-badan suuq-geyn iyo farsamooyin isgaarsiineed oo aysan waligood dhammaystirin.
Warqada cad waxay bixisaa afar talo:
Samee bar-tilmaameed adoo qof ka dhigaya shaqaalaha suuq geynta mas'uul ka ah baraha bulshada. Shaqsigan waa inuu mas'uul ka noqdaa farsamaynta suuq geynta istiraatiijiyadda warbaahinta bulshada, oo ay ka mid tahay abuuritaanka hannaan dejinaya xuduudaha gaadiidka la isticmaali doono, sida loo maamuli doono, iyo dadka loo qoondeyn doono iyada oo la raacayo siyaasadda shirkadaha.
La shaqee shaqooyinka kale ka qaybqaata wareegga iibsiga ee ballaaran, oo ay ku jiraan adeegga macaamiisha iyo maaraynta wax soo saarka. Marka la gaaro 2010, in ka badan 60% ee Fortune 1000 shirkadood oo leh degel waxay yeelan doonaan nooc ka mid ah bulshada khadka tooska ah ee internetka oo loo adeegsan karo ujeedooyinka xiriirka macaamiisha. Si kastaba ha noqotee, waxaa muhiim ah in suuqgeynta ay kala saarto doorka warbaahinta bulshada ee howlaha xaraashka ah ee ka imanaya boosteejooyinka adeegga macaamiisha ee ku wajahan si loo hubiyo in lahaanshaha si sax ah loogu qoondeeyay dhammaan howlaha kala duwan ee ka qeyb qaadanaya fulinta istiraatiijiyadda ballaaran ee CRM.
Ka hel dadka shaqaalaha suuq geynta tababarka iibka, gaar ahaan kuwa ku hawlan golayaasha bulshada ee awood u siinaya isgaarsiinta hal-hal-qof. Suuqleyda aan lahayn tababar ama khibrad “maaraynta diidmada” ayaa si gaar ah ugu nugul adduunka baraha bulshada, maxaa yeelay macaamiisha ayaa si xor ah u dhaleeceeya adeeg bixiyaha iyo alaabtiisa ee fagaareyaasha.
U dhaqan sidii go-u-socod iyadoo lala yeelanayo hoggaamiyeyaasha iibka iyo dadka wax iibiya ee doonaya inay ka qaybgalaan warbaahinta bulshada, gaar ahaan meelaha ay ku wada xidhiidhaan hal-ka-badan, isla markaana lagu tababaro isla jihada tifaftirka ee la siiyay xirfadlayaasha suuq-geynta iyo isgaarsiinta si loo hubiyo ilaalinta astaanta iyo farriinta joogtada ah.
Waxaan u hayaa xoogaa tilmaam ah iibiyayaashu inay bilaabaan qaadashada Baraha Bulshada - laakiin warqadda cad waxay faahfaahin ka bixineysaa istiraatiijiyad guud oo shirkadeed. Aniguba waan jiray ka qaybgalka tababarka iibka sanadkii la soo dhaafey waxaan aad ugula talin lahaa dhamaan suuqleyda! Waxaan wareysanayaa Bill Godfrey, agaasimaha guud Aprimo maanta, waana laga wada hadli doonaa dhacdooyinkan - fiiri fiidiyoow soo socda!
Isku-darka Aprimo, ee ku saabsan barnaamijka suuq-geynta dalabka ayaa awood u siinaya B2C iyo B2B suuqleyda inay si guul leh ugula wareegaan doorka isbeddelka suuq-geynta adoo gacanta ku haya miisaaniyadda iyo qarash gareynta, baabi'inta muraayadaha gudaha ee qulqulka shaqada iyo fulinta ololeyaal cusub oo kaamil badan leh si loo wado ROI la cabbiri karo. ka Aprimo website.
Tags: maaraynta diidmadadiidmada iibkawarbaahinta bulshadamaaraynta diidmada bulshada
Hal qayb oo ka mid ah Deep Ripples Inc.
Warbaahinta bulshada ayaa hubaal ah inay dedejineyso ka fakarka "waaxyaha" maaddaama khadadka oo dhami ay xumaadaan. Ku fiican ganacsiga.